'Gammachuun koo gutuu kan ta'u yoo obboloonni koo hafan hundi bahaniidha' - BBC News Afaan Oromoo
'Gammachuun koo gutuu kan ta'u yoo obboloonni koo hafan hundi bahaniidha'
15 Guraandhala 2018
Goodayyaa suuraa Obbo Olbaanaa Leellisaa
Ogganttoota siyaasa Oromoo gurguddaa dabalatee hidhamtonni 746 kalleessa Roobii Guraandhal 15, 2018 gadhiifamaniiru. Obbo Olbaanaa Lellisaa, kabajamoo Ahmaddiin Jabali, Eskindirri Nagaa fi dubartoonni hidhaan umurii guutuu itti murta'ee keessatti argamu.
Kanneen keessaa BBC obbo Olbaanaa dubbuusee ture. Obbo Olbaanaa Leellisaa hidhamtoota Oromoo qor-qalbii sababii mirgaaf dubbachuufi walgahii taasisuu qofaan hidhaatti darbataman kumaatama keessaa tokko.
Obbo Olbaanaa Leellisaa eenyuu?
Obbo Olbaanaan dhalatanii kan guuddatan godina shawaa Lixaa bakka Gooroo Solee jedhamtuutti yoo ta'u, oggummaa qonnaatiin waajjira motummaatti qacaramanii hojachaa turan. Haa ta'u bara 2005tti erga Kongrasii Ummata Oromoo bakka bu'uun filannoo keessatti hirmaatanoo booda hojiirraa arii'ataman.
Obbo Oblaanaan miseensa Caffee naannoo Oromiyaatiif filatamuun hanaga bara 2010tti hojataniiru. Erga paartiin biyya bulchaa jiru bara 2010tti 'filannoo' mo'ateen booda, Obbo Olbaanaan waajjira Kongirasii Ummata Oromoo (OPC) dame Finfinneetti qindeessaa hawaasaafi Tarsiimoo siyaasaa dhaabichaa ta'uun hojataniiru.
Bara 2011tti, guyyaadhuma bakka bu'oota dhaabbata idil-addunyaa Amanistii Intarnaashinaal waliin wal arganitti, Obbo Baqqalaa Garbaa fa'i waliin qabaman. Isaan boodas Muddee 11, 2012 addabbiin hidhaa waggaa 13 itti murtaa'e. Ergasi boodas hidhaarra kan turan qabsaa'oon kun, dhiibbaafi warreegama hedduun booda amma bilisummaan firaafi lammii jidduu socho'uuf bahaniiru.
Guuyyaa hidhaa itti bahan akkamiin ibsuu?
Gammachuun maatii, firaafi leelistoota isaanii daangaa yaadhabuulleen malee, Obbo Olbaanaan garuu miira walmakaa keessatti akka argama dubbatu. ''Qbsoon keenya eddo kana gahee, osoo hinjaalatiin dirqiin bahuu keenyatti baayyeen gamada. Haa ta'u malee hiriiyyootaafi obboloota koo warra na waliin bane mana hidhaatti dhiisee bahu koof baayyeen gaddisiisa. Gammachuun koo gutuu kan ta'u yoo obbooloonni koo hafan hundi bahaniidha,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
Kana malees turtii mana hidhaa ilaalchisuun ''jalaqabumaa kaasee hidhaan hafee hanga wareegama lubbuutti murteeffanne waan baaneef manni hidhichaa baduus toluus wanti natti ulfaate hinjiru. Ani akka qabsootti malee takkaa akka mana hidhaatti yaadee hinbeeku, jechuun kuttannoo ijjanoo isaanitiif qaban BBC'tti himan.
Haa ta'u malee dhiibbaan mana hidhaa keessatti guyyaa guyyaa Oromoorratti raawwatamu caalaa kan isaan gaddisiise ta'us himu.
Hala achi keesstti raawwatamaa tures ''wanti addatti oromoorratti raawwatamu tarii kan jecha afaanitiin ibsamuu mitii'' jechuu attam gochi mana hiidhaa keessatti Oromoorratti raawwatamu akka keessoo isaanii hube dubbatu Obbo Olbaanaan.
Namoonni ni hiikamu jedhamanii hinyaadaman hiikamuun isaanis qabsoon Oromoo hangam akka cimaa dhufe kan agarsiisuudha kan jedhan hayyuun kun, ''akka kana dura tarkaanfii lama gara duraatti sadi gara boodaatti suna akka hin umamneef ummanni waldhaggeefannaafi tokkummaasaatiin itti fufu qaba,'' jedhuun yaadachisaniiru.
Akko Obbo Olbaanaatti, ummanni akkuma amma eegaleetti tokkommaafi waldhaggeettiin yoo itti fufe milkaa'inni dhihoodha.
Mana hiidhaatii isaan baasuuf haarsaan qeerroofi ummata Oromootiin kanfalee olaanaa ta'u cimsanii kan eeran Obbo Olbaanaan, ''sila kabaja isaanitiif malee hiriyyootaafi ijjoolee qabsooftota keenya mana hidhaatti dhiifnee bahuun dhiibee guddaadha'' jedhaniiru.
Warreen hafan hundi hanga gadhhiifamanitti qabsoon keenya itti fufuu qaba jedhaniiru.